ဝေဿန္တရာ၊ ဘူရိဒတ်၊ ဥပကဆာဝါ၊ ကာလီဒါသ စသော ဇာတ်ချင်းများနှင့် မေတ္တာစာများ၊ ဟောစာများ၊ သိသိက်စာများ၊ တဘောင်စာများ၊ တေးထပ်၊ ကြိုး၊ သဖြန်များ စသည်တို့ကို နှစ်ပေါင်း ခန့်ရေးသားခဲ့သော ကျပင်း ဆရာဖီးကို ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့နယ် ယခင်က ကြာအင်း ခေါ် ကျပင်မြို့တ ...
မြန်မာစာပေလောကတွင် ရှားပါးစာရင်းဝင်ဖြစ်သော သိပ္ပံဝတ္ထုများကို ရေးသားခဲ့ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့သည့် ကျော်စိန်ထွန်း ကို ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အသုတ်မြို့၌ အဖ ဦးညိုမြ - အမိ ဒေါ်ခင်ရွှေ တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းသုံးရောက်အနက် အ ...
ကျော်ထွန်း၊ ဦး (ကဝိမျက်မှန်)
အစောဆုံးနှင့် ခေတ်မီ၍ စနစ်အကျဆုံး သတ်ပုံကျမ်း တစ်စောင်ဖြစ်သည့် ကဝိမျက်မှန် သတ်ပုံကျမ်း ကို ပြုစုခဲ့သူမှာ ကဝိမျက်မှန် ဦးကျော်ထွန်း ဖြစ်သည်။ ကဝိမျက်မှန် သတ်ပုံကျမ်းကို ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီး မဖြစ်မီ ခရစ်နှစ် ၁၉ဝ၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၅- ခုနှစ်တွင် ရန ...
ကျော်ထွန်း၊ ဦး (အရေးပိုင်)
ကိုကျော်ထွန်းသည် ခရစ် ၁၈၈၆ ခုနှစ်၊ အသက် ၂ဝ အရွယ်တွင် အင်္ဂလိပ် အလယ်တန်း စာမေးပွဲကို ပြည်မြို့မှ ဖြေဆိုရာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ခရစ်နှစ် ၁၈၉ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဘင်္ဂလားစာမေးပွဲ ကာလကတ္တား တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ကို ဖြေဆို အောင်မြင်ခဲ့ပြန်သည်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွ ...
စာရေးဆရာ ထားဝယ်ကျော်မင်း ကို တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့တွင် အဖ မီးပုံးပျံ ဦးကျော်ရင်၊ အမိ ဒေါ်မမ တို့က ၁၉၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ကာတွန်းဆရာ ကာတွန်းကျော်ဆန်းနှင့် ညီအစ်ကိုတော်စပ်သည်။ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ၁ဝ တန်း အထိ ပညာ သင်ကြ ...
မြန်စာဂုဏ်ကျော်မြင့် သည် မြန်မာ အမျိုးသား စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မြန်စာဂုဏ်ကျော်မြင့်အား ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပန်းတနော်မြို့ မြေစာရင်း အင်စပက်တော် ဦးထွန်းမောင်၊ ဒေါ်စောသင်တို့က မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်း ဦးဖိုးကျော်မြင့် ဖြစ်သည်။ ငယ် ...
ကျော်ရင်၊ ဦး (ပုပ္ပား)
ပုပ္ပား ဦးကျော်ရင်သည် ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ရသေ့တောင်ရွာ ဇာတိဖြစ်၍ ဦးကြာခိုင်၊ ဒေါ်အုန်းရီတို့၏ သားဖြစ်သည်။ ၁၂၆၉ ခု၊ နတ်တော်လဆန်း ၅ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ပညာ ဆည်းပူးချိန်တွင် ရသေ့တောင်ရွာမှ တည်ပင်တဲရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ဦးရီးတ ...
စာရေးဆရာကျော်သန်းမြင့် ဗန်မော်ဇာတိဖြစ်၍ အဖ ဦးချို အမိဒေါစိန်တို့၏အကြီးဆုံးသားဖြစ်ကာ မွေးချင်းလေးဦးရှိသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝိဇ္ဇာဘွဲကို ပြင်ပမှ ဖြေဆိုရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၅ တံခွန်ဂျာနယ်တွင်ရေးသားသောကဗျာများမှတဆင့် စာပေနယ်ထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ တွင်ဗန် ...
ကျော်ဟိန်း သည် မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ချစ်ခင်လေးစားခြင်းခံရသော မင်းသားကြီးဖြစ်သည်။ ကျော်ဟိန်းသည် ၁၉၄၇-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၁၄ရက်၊ တနင်္လာနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ကျောင်းကုန်းလမ်း၌ အငြိမ်းစား ခရိုင်ရဲဝန် အဖ ဦးဂျွန်မောင်စိန်D.Y.S. ...
စာရေးဆရာ ကျော်အောင် ကို ၏ပခုက္ကူမြို့ ပေါင်းလောင်းရှင်ရပ် အဖ ဒိစတြိတ်ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကြင်မောင်၊ အမိ ဒေါ်တင်မြင့်တို့က ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်းနှစ်ယောက်ရှိသည့်အနက် အငယ်ဖြစ်သည်။ ငယ်မည်မှာ အောင်ကြည ...
ရှုမဝဦးကျော်သည် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၁၀-ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၁-ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ရက်နေ့တွင် ရွှေတောင်မြို့၊ ကြာနီကန်ရပ်၌ အဖ ဦးဖိုးတုတ်နှင့် အမိ ဒေါ်ရွှေညွန့်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။
ကြည်ဆွေ၊ မောင်၊ စာရေးဆရာ
စာရေးဆရာ မောင်ကြည်ဆွေ သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံဇာတိ ဖြစ်သည်။ ၁၄ နှစ် အရွယ်တွင် စာပေ လောက ထဲသို့ ခြေစုံပစ် ဝင်ခဲ့သည်။ စာပေ စင်မြင့်သို့ တင်ပေး ခဲ့သူမှ ရှုမဝ ဦးကျော်ပင် ဖြစ်သည်။ ရှုမဝ မဂ္ဂဇင်းသို့ ၁၉၄၉ ခုလောက်တွင် ရောက်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦးစွာ အလုပ် ...
ကြည်ဇင်၊ မောင် (နာဂတောင်တန်း)
နာဂတောင်တန်းခရိုင် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် မောင်းခန်းရွာ၌ အဖ ရှမ်းလူမျိုး တောင်သူကြီး ဦးစိုးပင်၊ အမိ ဒေါ်စောခင် တို့က ၁၉၃၁ ခု တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးကြည်ဇင် ဖြစ်သည်။ လောကုတ္တရာစာပေနှင့် မြန်မာစာပေ အဆီအနှစ်များကို ဇာတိ မောင်းခန်းရွာ ရွှေတဆယ့ ...
ဦးကြည်ညွန့် ချစ်ကြည်ရေး ကြည်ညွန့် ကို အဖ ဦးဖိုးထွား အငြိမ်းစား ရဲမှူး - ကွယ်လွန် နှင့် အမိ ဒေါ်ခင်ပု ကွယ်လွန် တို့မှ ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ယခု ရန်ကုန်တိုင်း ဥက္ကံမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်တွင် ပဲခူးတိုင်း ကြို့ပင်ကောက်မြို့ အမျိုး ...
ကြည်လင်၊ မောင် (စာရေးဆရာ)
ကြည်၊ ကို (ပြင်ဦးလွင်)
၁။ အမည်ရင်း - ဦးခင်မောင်ကြည် ၂။ မိဘအမည် - ဗိုလ်မှူးကြီး ဘကြင် + ဒေါ်သန်းသန်း ၃။ မွေးသက္ဗရာဇ် - ၆၊ ၁၁၊ ၁၉၄၅ ၄။ မွေးဖွားရာဒေသ - မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့
ဦးကြည် (သစ္စာဒီပက - မူလဓမ္မာစရိယ)
ဦးကြည် သည် သစ္စာဒီပက ဝိပဿနာအဖွဲ့ ကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် သာသနာပြု လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဆရာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သည့် စာအုပ်များ၊ တရားဓမ္မများကို ဟောပြောပြသခြင်း စသည့် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့၌ အဖ ဦးအုန်းသောင်း၊ အမိဒေါ်အေးတင့်တို့က ၁၉၂၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက် သောကြာနေ့ ညဉ့် ၁ဝ နာရီ ၂၄ မိနစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်းသုံးယောက်တွင် အငယ်ဆုံးသား၊ အမည်ရင်းမှာ ဦးသောင်းတင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၂ တွင် အင်းစိန် မြူနီစီပယ်ကျောင်း ...
ဧရာဝတီတိုင်း ဓနုဖြူ မြို့နယ် ဗျင်းဘွဲ ရွာတွင် အဖ ဦးပိ၊ အမိ ဒေါ်စောမြ တို့က ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ တရုတ် - မြန်မာ ကပြား ဖြစ်၏။ မွေးချင်း ငါးယောက် အနက် ဒုတိယသား ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးမြင့်ဆွေ ဖြစ်၏။
ကြာညို၊ မောင် (ဘဝသစ် ဦးအောင်ကျော်)
ငယ်စဉ်က ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဝါတွင်း၊ ဝါပ စုစုပေါင်း ခြောက်လကို ကိုရင်ဝတ်ခဲ့ပြီး အခြေခံ ဘာသာရေး စာပေများကို သင်ကြားခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဝင်၊ မဟာဝင်၊ ရာဇဝင်၊ ဇိနတ္ထပကာသနီ၊ ဦးပေါ်ဦးလျှေက်ထုံးကျမ်း စသော ...
ကြီး၊ ဦး (ဝန်စာရေး)
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၂၆၃ ခုနှစ်၊ အင်္ဂလိပ် သက္ကရာဇ် ၁၉ဝ၁ ခုနှစ်တွင် နှောင်းခေတ် မြန်မာ ဝတ္ထုများ အနက် ရှေးအကျဆုံး ဖြစ်ပေသော ဂျိမ်း လှကျော်၏ မောင်ရင်မောင် မမယ်မ ဝတ္ထုကို ဗြိတိသျှ ဘားမား ပုံနှိပ်တိုက် က ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေသည်။ ဤဝတ္ထုမျိုးမှာ ရှေးအခါက မပေ ...
တောင်တွင်းဆရာ‌တော်သည် ‌တောင်တွင်းကြီးမြို့တွင်၊ သက္ကရာဇ် ၁၀၈၄ ခုနှစ်၌ ဖွားမြင်သည်။ မျိုးရိုးမှာ ‌တောင်တွင်းကြီး မြို့သူကြီး ရိုးဝဍ္ဎနရာဇာဘွဲ့ခံ ဦးကျံ‌ဘော်၏ အနွယ်အဆက်ဖြစ်သည်။ မိဘများက မှည့်‌ခေါ်‌သော ငယ်မည်မှာ ‌မောင်‌ပျော်ကိုအစွဲပြု၍ ‌တောင်တွင်းဆရာ ...
ပခုက္ကူ မြို့တွင် အဖ ပွဲရုံပိုင်ရှင် ဦးဘဘွား၊ အမိ ဒေါ်လှဝင်း တို့က ၁၉၃၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက် တို့ တွင်မူ ၆ မေ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဟု ဖော်ပြ ထားသည်) နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ခြောက်ယောက် အနက် စတုတ္ထမြောက်၊ ငယ်နာမည် မောင်ခင်ကြီး၊ အမည်ရင်း ဦးထွန်းခင် ဖြ ...
ခင်ဇော်၊ ဦး (ကေ)
ဦးခင်ဇော်ကို ၁၉၀၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် သာယာဝတီခရိုင်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၌ အဖ ဦးဖိုးသွင်၊ အမိ ဒေါ်ဖွားတို့က ဖွားမြင်သည်။ ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းမှ ဟိုက်စကူးဖိုင်နယ် အောင်မြင်သည်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္က ...
အမည်ရင်း ခင်မောင်ဇော်၊ မော်လမြိုင်ဇာတိ၊ ငယ်စဉ်က မော်လမြိုင်မြို့ အထက ၁၊ ရန်ကုန်မြို့ ဗဟို အစိုးရတန်းမြင့်ကျောင်း တို့တွင် ပညာသင်ခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်သောအခါ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၌ ဆက်လက် ပညာဆည်းပူးခဲ့ရာ B.Sc. ဘွဲ့နှင့် ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာနှင့ ...
၄။ မွေးဖွားရာဒေသ - မုံရွာ ၁။ အမည်ရင်း - ဦးခင်မောင်သန်း ၂။ မိဘအမည် - ဦးကြင်ဖေ၊ ဒေါ်မိမိ ၃။ မွေးသက္ကရာဇ်- ၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉၆၁ - သိပ္ပံဂုဏ်ထူးဘွဲ့ကို စိတ်ပညာ အဓိကဖြင့် ရခဲ့သည်။ မန္တလေးတက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာန တွင် သရုပ်ပြဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ...
၄။ မွေးဖွားရာဒေသ - မြောင်းမြမြို့ ၅။ ကလောင်အမည်ခွဲများ - စိုင်းဆေးနော်၊ ညိုမင်းလွင် ၂။ မိဘအမည် - ဦးဖိုးညှင်း + ဒေါ်ဖွားစု အမှန်တကယ် အဖေရင်းနှင့် အမေရင်းမှာ တောတွင်း၌ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗကပ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ သခင်သန် ...
ခင်အောင်၊ ဘာမထီ (ရွှေဘို)
ရွှေဘိုဘာမထီခင်အောင်ကို ၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုမြို့၌ အဖ ဦးဖေခင် အငြိမ်းစားရဲဝန် ခုံသမာဓိမြို့ဝန်၊ အမိ ဒေါ်သန်းမေတို့က ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဒသမတန်း အထိ ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ် ဗဟိုစည် သတင်းစာတွင် တ ...
ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့နယ် ရစ်ကံကြီး ကျေးရွာ အဖဦးကျော်စိန် အမိဒေါ်လှသန်းတို့က ၁၉၄၀ ခုနှစ်ဇန်နဝါ ရီ လ ရက် နေ့တွင်ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အမည်အရင်း ဦးချစ်စံဖြစ်သည်။ ရစ်ကံကြီးကျေးရွာ၊ မူလတန်းကျောင်းတွင် စတင်ပညာသင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရစ်ကံကြီးရွာ သာသနာ့ဇောတိကပုပ္ဖ ...
မေမြို့ချစ်ဆွေကို ၁၂၉၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆုတ် ၁၄ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် မေမြို့ ၌ အဖ ဦးရင်၊ အမိ ဒေါ်ဖွားရှင်တို့က မွေးဖွားသည်။ မေမြို့ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မြေတိုင်းကျောင်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဌာနက ကျင်းပသော မြေတိုင် ...
၁။ အမည်ရင်း - ဦးချစ်မောင်ဦး၊ ၂။ မိဘအမည် - ဦးဘဦး + ဒေါ်သန်းတင်၊ ၃။ မွေးသက္ကရာဇ် - ၄၊ ၂၊ ၁၉၂၃၊ ၄။ မွေးဖွားရာဒေသ - မန္တလေးမြို့၊ ၅။ ကလောင်အမည်ခွဲများ - ခင်ပုန်းဆွေ၊ တက္ကသိုလ် မောင်မုန်းဆွေ၊ ချစ်မောင်ဦး၊ တက္ကသိုလ် အောင်ချစ်၊ ချစ်လေး။
ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့၌ အဖ ဦးချစ်တင်၊ အမိ ဒေါ်သောင်းညွန့် တို့က ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးလှဝင်း ဖြစ်သည်။ ကဝမြို့ ဘုရားလေးကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီး ထံ၌ ပညာစသင်သည်။ သာကေတ သဒ္ဒါရုံ မူလတန်း ကျောင်းတွင် မူလတန်းပညာဆည် ...
ချစ်၊ ကို (စာရေးဆရာ)
ကိုချစ် သည် မန္တလေးမြို့မှ စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၅၃-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးသောင်း၊ အမိ ဒေါ်ခင်မေတို့က မန္တလေးမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးမြင့်သိန်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၉-ခုနှစ်မှ စ၍ ဘီဘီအမ်ကျောင်းတွင် စတင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၇၁-ခု ...
ခ၊ ဦး (ပဉ္စရူပံ)
ပဉ္ဒရူပံဦးခသည် မြန်မာစာပေလောကတွင် ခေတ်မီစာအုပ်ထုတ်လုပ်မှုကို အစောဆုံးစတင်သူဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်စာအုပ် အပြင်အဆင်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို အဆင့်မြင့်ခေတ်မီမီ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဆရာကြီး ဦးဂုဏ်ဘဏ်ကို ၁၂၅၉ ခု၊ တပေါင်း လပြည့်ကျော် ၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မုံရွာမြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ အဖမှာ မြန်မာဘုရင် လက်ထက် လေခပျံချီနှင့် ဝဏ္ဏဓမ္မကျော်ထင် ဘွဲ့ရ စာရေးတော်ကြီး ဖြစ်၍ ကိုလိုနီခေတ်တွင် ကျက်သရေဆောင် ရွှေစလွယ်ရဘွဲ့ နှင့် ဘုရင့် တံဆိပ် ...
ဦးဘရီ၊ ဒေါ်တင်မေတို့က တောင်သာမြို့၌ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးတင်စိုး ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၌ အ.ထ.က တောင်သာမှ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သည်။ စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် တွင် တက်ရောက် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ်မ ...
၁၉၂၉-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အဖအမျိုးသားပညာဝန် ဦးစိုးဝင်း၊ အမိဒေါ်မမကြီး တို့ကဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်းယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးအောင်သန်းဝင်း ဖြစ်သည်။
ဆရာကြီးဦးစိုးမောင်ကို အဖ ဦးလူဒင်၊ အမိ ဒေါ်အုန်းမေတို့က ၁၉၂၀-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ကလောင်အမည် မှာ သာဂရ-ငစိုး ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၂-ခုနှစ်တွင် ထားဝယ်မြို့၊ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအထက်တန်းကျောင်းတွင် အလယ်တန်းပညာကို သင်ယူခဲ့သ ...
၁၉၄၃ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်တွင် အင်းစိန် ပေါက်တောရပ်နေ ဦးအေးမောင်၊ ဒေါ်အုန်းတို့မှ မွေးသည်။ ငယ်မည်မှာ အပါ ဖြစ်ပြီး အမည်ရင်းမှာ မောင်မောင်ကြီး တွင်သည်။ ၁၉၄၉ ခုတွင် ဒေါ်ချစ်မေကျောင်းတွင် ပညာစသင်ပြီး ဦးငွေထွန်းကျောင်း၌ စတုတ္ထတန်း ပညာသင်ဆုရသည်။ တက္ကသို ...
မကွေး ခရိုင် မြို့သစ် မြို့နယ် ဂွေးချိုရွာ တွင် အဖ ဦးကြည်သာ၊ အမိ ဒေါ်သိုင်း တို့က ၁၉၁၂ ခု ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွား ခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်သားတွင် ဖခင် ဆုံးသောကြောင့် မိခင်၏ရွာ ရှောက်ပင်ခြံ ရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် ခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်က ချောင်ဖြူကျောင် ...
ငွေဥဒေါင်း သည် မြန်မာ့စာပေလောက၌ ဗုဒ္ဓစာပေအား အနုစိတ် မှုန်းခြယ်နိုင်သူအဖြစ် လူသိများသည်။ ရွှေဥဒေါင်းသည် စုံထောက် မောင်စံရှားနှင့် ခွဲမရသကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓစာပန်းချီနှင့် ငွေဥဒေါင်းသည်လည်း ပိုင်းမပြနိုင်သည့် အမှတ်အသားပင် ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ကျိုက်လတ်မြို့ အနီး ထိုင်ကူမြစ်တန်း ရွာတွင် အဖ မြေပိုင်ရှင် ဦးသာဘော်၊ အမိ ဒေါ်ကျော့ တို့က ၁၉၁၈ ခုတွင် မွေးဖွား ခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးဘညွန့် ဖြစ်သည်။ ကျိုက်လတ်မြို့ အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ပညာ ဆည်းပူး ခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခု ကျောင်းသား ...
စန်းငွေ၊ ဦး (ဒဂုန်)
၁။ အမည်ရင်း - ဦးစန်းငွေ ၂။ မိဘအမည် - ဦးအောင်ဇေယျ + ဒေါ်သဲအူ ၃။ မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၉၊ ၇၊ ၁၉၁၀ ၄။ မွေးဖွားရာဒေသ - ကျောက်ပန်းတောင်မြို့နယ်၊ တည်ပင်ရွယ် ၅။ ကလောင်အမည်ခွဲများ - ဒဂုန်မောင်စံသူ၊ ဘားမားစန်းစန်း၊ သီရိပစ္စယာ စောဥမ္မာ၊ ပေါက္ကံမောင်တင်၊
ကန်တော့ခံ သက်ကြီးစာပေပညာရှင် ဆရာကြီး ဦးစဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်း ကို ဦးဂေါ်ရာ စဝ်စံလှိုင်၊ ဒေါ်နန်းဌေး ဒေါ်ဌေးဌေးတို့က ညောင်ရွှေမြို့နယ် မိုင်းသောက်မြို့၌ ၁၉၂၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဆရာကြီး ဦးစဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်းသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် တက္ကသ ...
တက္ကသိုလ်စိန်တင်ကို ဖြူးမြို့တွင် ၁၉၃၅ ခု၊ ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့၌ အဖအငြိမ်းစားကျောင်းဆရာ ကြေးမုံသတင်းထောက် ဦးညွန့်၊ အမိ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ခင်စုတို့မှ ဖွားမြင်သည့် မွေးချင်းငါးယောက် အနက် ဒုတိယမြောက်သား ဖြစ်သည်။ ငယ်မည်မှာ ဆတ်ထူးဖြစ်ပြီး အမည်ရင်းမှ ...
▪ ၁၉၂၉ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အဖ ရွှေကုန်သည် ဦးမောင်လေး၊ အမိ ဒေါ်အေးချို တို့က ပျဉ်းမနားမြို့၌ မွေးဖွားခဲ။ ▪ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်းမှ ၁၉၄၇-၄၈ ခုတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ခဲ့။ ၁၉၅၄ ခုတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာ ဂုဏ်ထူး မြန်မာစ ...
စိုးနိုင်၊ (မန္တလေး တက္ကသိုလ်)
၁၉၈၉၊ ၁၉၉၂ -" ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း၏ လောကုတ္တရာ စာပေ အချို့ အပေါ် လေ့လာချက်”၊" သာဓု.သုခ” စာတမ်းများ ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၈၇၊ ဧပြီလ -" ငွေရောင် တောင်တန်းများ ဆီသို့ တနေ့တလံ” ခရီးသွား ဆောင်းပါးကို ‘သောင်းပြောင်းထွေလာ’ မဂ္ဂဇင်းတွင် အခန်းဆက် ရေးသားခဲ့သည်။ ...
၂ဝဝ၅ ခု၊ ဇူလိုင်ထုတ် ရာပြည့် ဦးစိုးညွန့် စုစည်း တည်းဖြတ်တဲ့ ၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာရွှေး ဆရာ ၁ဝဝ အတ်ထုပ်ပတ်တိ အကျုဉ်း စာအုပ်မှ စာရွှေးတွေရဲ့ အတ်ထုပ်ပတ်တိ အကျဉ် တွေကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိုးမြိုင်၊ ဦး၊ စာရေးဆရာ
စာရေးဆရာ ဦးစိုးမြိုင် ကို ၁၉၃၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း ပျဉ်းမနားမြို့၌ အဖ ဝတ်လုံတော်ရ ဦးလှဘူး၊ အမိ ဒေါ်အေးရင်တို့က မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးစိုးမြိုင် ပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာပြ ဆရာ အဖြစ် သုံ ...
စာကြည့်တိုက်ပညာရှင် နှင့် စာရေးဆရာ စိုးရှိန်ကို အဖ ဦးစော၊ အမိ ဒေါ်မြင့်မြင့်တို့မှ ၁၉၂၇ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၇ ယောက်အနက် စတုတ္ထမြောက် ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်း ဦးမောင်မောင် ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က ပဲခူးအစိုးရအထက်တန် ...
ဉာဏ (စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ)
ထွန်းစိန်၊ ဦး (EEE)
ထွန်းမြင့်၊ ဦး (ဒဂုန်)
နန္ဒမိတ်၊ တက္ကသိုလ် (စာ‌ရေးဆရာ)
နေမျိုး၊ မောင် (စာရေးဆရာ)
ပညာ၊ ကို (အမရပူရ)
ပေါက်စည်၊ မောင် (မန်းတက္ကသိုလ်)
ပွား၊ ဦး (မြန်မာပညာရှိကြီး)
ဖိုးစိန်၊ ဦး (စာရေးဆရာ)
ဖေငယ်၊ မောင် (ဦးတင်ဖေ)
ဖြူး၊ မောင် (ဒေါက်တာ)
ဗလ၊ ဗိုလ် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)
ဘရင်၊ ဦး (ဟံသာဝတီ)
ဘသော် (ခ) မောင်သော်က၊ ဗိုလ်မှူး
ဘိုးသင်း၊ ဦး (စစ်ကိုင်း)